Soo xulista Golaha Wakiillada Puntland oo wajigii labaad gashay – Kalfadhi
Guddiga Ansixinta iyo Xallinta Khilaafaadka Golaha Wakiillada Puntland ayaa maanta sheegay iney ku hawlan yihiin kala saarista musharraxiinta ay isimada deegaanku u soo gudbiyeen ee u tartameysa kuraasta Baarlamaanka Puntland. “Dee waxaa jira Reer leh Xubin, oo shan iyo toban Xubnood soo xareeyey, marka waxaan galnay wajiga labaad oo aynu ku kala gureyno” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddigaas Caaqil Cismaan Ismaaciil Barre.
Waxa uu maanta la hadlayey suxufiyiinta, kuwaas oo uu u sheegay iney ku rajo weyn yihiin iney 31-ka bishan ku dhawaaqaan Golaha Wakiillada cusub ee Puntland, kuwaas oo bisha ugu horreysa sanadka soo socda ku dooran doona Garoowe Madaxweynaha Puntland ee 5-ta sanee xigta. “Sida ay caadadu ahaan jirtay 31-ka ayey ahayd, marka waqtigaa ma rabno inaan ka hordhacno ama ka dib dhacno” ayuu yiri Caaqil Cismaan.
Waxa uu sheegay in shir ka dhacay Garoowe ay isugu yimaadeen Musharraxiinta Xilka Madaxweynaha, Isimada, Saraakiisha Ciidanka iyo Guddiga Aansixinta iyo Khilaafaadka Puntland. “Runtii waxa laga hadlayey waxa ay ahayd doorashada soo socota” ayuu yiri Caaqli Cismaan. Waxa uu sheegay iney isu caddeynayeen sida ay doorashada u dhici doonto.
Caaqilku waxa uu Guddigiisa ka fogeeyey iney Madaxtooyadu ku cadaadineyso soo saarista Wakiillo gaar ah, oo ay iyadu dooneyso, taas oo ahayd eed ka imaaneysay qaar ka mid ah Musharraxiinta tartanka kula jirta Madaxweynaha xilku ka dhamaanayo ee Cabdiwali Gaas. Ciidamada Ammaanka Puntland ayuu sheegay iney door weyn qaadan doonaan marka ay doorashadu dhaceyso.